Lehilahy Miozolomana iray Nodorana sy Novonoina Anatin’ny Fankahalana Silamo ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2018 16:49 GMT
Fantatra amin'ny anarana hoe Shambunath Raigar (38) ilay heverina ho tompon'antoka tamin'ny famonoana, izay manana lahateny feno fitiavana fatratra ny Haindò ao amin'ny lahatsary YouTube. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i Vir Bhoomi.
Niteraka fanairana mihamiakatra hatrany tamin'ny herinandro voalohan'ny volana Desambra ny fanafihan'ny Mpanandratra ny Haindò ho ambony indrindra an'ireo vitsy an'isa ao India, rehefa nisy mpiasa Miozolomana iray izay nalain'n'ny Haindò iray fantatra amin'ny fiteny fanatika antserasera amin'ny fankahalany Miozolomana an-keriny sy nodorana velona tao Rajsamand, Rajasthan.
I Mohamed Afrajul ilay niharam-boina,50 taona izy ary avy any Bengal Andrefana, fanjakana amin'ny faritra atsinanan'i India. Mbola tanora dia tanora tokoa io niharam-boina io dia niasa ho fanampiana ny famelomana ny fianakaviany ahitana zaza telo, hoy ny teny fanampiny nataon'ny tati-baovao marobe.
Nisioka i Mamata Banerjee, lehiben'ny Minisitra ao Bengal Andrefana, hoe:
Manameloka mafy ny famonoana ilay mpiasa iray avy aty Bengal izahay. Fa ahoana no mahatonga ny olona no feno habibiana toy izany? Mampalahelo.
Novolavolain'i Shambhu Lal Raigar (38 taona) ity tranga mahatsiravina ity, nihevitra ity mpivarotra marbra ity fa hisorohana tranga ‘Fitiavana Jihad‘, teny ampiasaina mba hilazana zazalahy na lehilahy lehibe Miozolomana mandrokindroky vehivavy tsy Miozolomana mba hivadika ho Silamo amin'ny filazana fa noho ny fitiavana, ny famonoana an'i Afrajul,.
Na dia efa noharatsiana ho teny tsy misy dikany aza io voambolana io, dia mbola nampiasain'ireo mpitarika pôlitika mba hahazoana vato betsaka hatrany amin'ny fifidianana sy hampizarazara ny fiarahamonina Haindò-Miozolomana ka miafara amin'ny fifandonana ara-pivavahana.
Agnivo Niyogi bilaogera Indiana iray nisioka hoe:
Aza adinointsika fa novonoina i Afrajul Khan, eny fa na dia i Rizwanur aza folo taona mahery izay noho ny fahasahiany nitia. Efa raiki-tapisaka amin'ny saina Indiana Tavaratra ny famonoana ho fiarovam-boninahitra. Mpiray tsikombakomba tamin'ny fanafenana io raharaha io na dia ny fitantanana ny polisin'i Buddhadeb aza.
Ao anaty lahatsary antserasera mahatsiravina iray, nalain'ny zazalahy 14 taona zanaky ny mpiray tampò amin'ny Raigar an-tsary manontolo ny toe-draharaha, tamin'ny nakan'ilay mpanafika an-keriny an'i Afraju, nandrarahana kerôzena tamin'ny vatany talohan'ny handehanany an-tongotra hiala teo tsimoramora. Manolo-kevitra sy mampiomana anao ny Global Voice hitandrina alohan'ny hijerenao ireo lahatsary ireo.
Mety ho heno mihiaka mitady famindram-po i Afrajul ao anatin'ireo lahatsary ireo raha manohy manatsatoka azy amin'ny fitaovana fambolena tsy misy fanenenana ilay lehilahy. Nalain'ilay voampanga ho any an-tsaha i Afrajul mba hoe omeny asa.
Nanambara fa nahazo filazana razana may amin'ny ampahany ny manampahefana, nefa tsy afaka mamantatra ilay lasibatra raha tsy mivoaka amin'ny aterineto ny lahatsary, sady maro no nahita sy nizara ireny. Nampitahan'ny polisim-panjakana tamin'ny lahatsary famonoan'olona mampihoron-koditra famoakan'ny Fanjakana Islamika ilay lahatsary.
Heno nanao fampitandremana ny Miozolomana ao India ilay voampanga fanatika loatra. “Izao no mety hitranga aminao raha manao ny “love jihand” [fitiavana jihad] eto amin'ny firenenay ianao.”
‘Love Jihad’ [Fitiavana Jihad] tsirinkevitra efa hita ho diso sy iadian-kevitra
Nampitodika ny fifantohana amin'ny lazaina ho firoboroboan'ny “Love Jihad” ,teny fampiasan'ny fampitam-baovao ao an-toerana ny raharaha Hadiya, vehivavy 24 taona, avy ao amin'ny Fanjakana Atsimon'i Kerala, .
Niakatra hatrany amin'ny Fitsarana Tampony ao India ny mariazin'i Hadiya sy ny fivadihany ho Silamo satria nolazain'ny fianakaviany fa noterena hivadi-pinoana ho lasa Silamo ny zanak'izy ireo vavy. “Nanakiana tanteraka” ireo fiampangana ireo anefa Hadiya ary nanamafy fa safidiny manokana no nivadihany ho Silamo nandritra ny fanambadiany.
Nolavin‘ny polisin'ny Rajasthan nandritra izany fotoana izany ny filazàna nataon'i Raigar ho nanao ‘Love Jihad’ na izay asa tsy manara-dalana hafa. Tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Indian Express, natahotra ny hanjavonan'io fahatsiarovana ratsy io haingana ao an-tsain'ny vahoaka ilay mpanao gazety Syed Hameed fa efa lasa ara-drariny ny manao resaka mirehidrehitra. .
Nilaza ny fahatafintohinany tamin'ny famitàna iraka hijery ny zavamisy tao Rjasmand i Harsh Mander, mpikatroky ny zon'olombelona iray:
Nihovitrovitra hatrany amin'ny fanahiko, niverina avy nanamarina ny zavamisy momba ny famonona noho ny fankahalana an'i Afrazul aho.
Fankahalana maro tokoa no nahalavo lehilahy tso-piaina iray nanokana ny fiainany tamin'ny asa mafy any amin'ny toerana lavitra mba ahafahan'ny ankohonany hanana fiainana tsaratsara kokoa.
Nanomo vahiny tamin'ny herisetra nifono fahatezerana tamin'ny alalan'iza i Shambhu?
Nanoratra tao amin'ny Twiter i Seshan Ranganathan izay mpanabe sady poeta:
Mihevitra aho fa tokony hanandra-peo hanohitra ny fifampisarahana , fifampiahiahiana ary fifankahalana ny Haindò tsirairay. Niala tanteraka ankehitriny ny tsy fitoniana ary nihazona ny rariny aza, izay fitakiana ara-drariny, ka saronan'ny fanilikilihana, ny tsy firaharahiana ary ny fahanginana tsimifaditrovana. Avelao hiaraka ny Indianina rehetra.
Nisioka i Sanjay izay ao anatin'ny Antoko Kongresy Indiana:
Tokony hahamenatra antsika rehetra ny famonoana feno habibiana an'i Mohammed Afrazul, tsy hisy na inona na inona hanelingelina ny feon'ny fieritreretantsika rehefa tsy manelingelina azy ny fankahalana mahatsiravina tao ambadik'izany. Ndeha ho adinointsika ny fahasamihafana pôlitika ary hihevitra fotsiny ny maha olona antsika fotsiny. Aiza no halehantsika?
Ilay mpitolona Saba Dewan nanoratra tao amin'ny Facebook:
The time to remain silent is over. The brutal murder in Rajsamand, Rajasthan of Afrazul Islam a migrant worker from West Bengal has brought home searingly the vulnerability of minorities, especially Muslims to hate crimes being committed against them in the India of today. The murderer, Shambhu Lal Regar can be heard on the video that he got made of the killing justifying his crime in the name of so called ‘Love Jihad’, a bogey conjured up by proponents of hatred to demonize and target Muslim men in consensual love relationships with Hindu women.
Mihosin-drà ny india. Tapitra hatreo ny fotoana hanginana. Mitondra ny faharefoan'ny vitsy an'isa, indrindra ireo Miozolomana mankany amin'ny heloka bevava vokatry ny fankahalana atao amin'izy ireo any India amin'izao fotoana izao ny famonoana tamin'ny fomba feno habibiana tao Rajsamand, Rajasthan an'i Mohammed Afrazul, ilay Miozolomana mpiasa mpila ravin'ahitra avy ao Bengal Andrefana. Heno miteny ao amin'ny raki-tsary ilay mpamono olona Shambhu Lal Regar fa lasa adalan'ny famonoana izy noho ny “Love Jihad”, fiteny ifanaovan'ireo mpanolotra ny fankahalana hanaratsiana sy hikendrena ireo lehilahy miozolomana mifankatia amin'ny vehivavy Haindò.
Mandritra izany, nosakanan'ny tambajotra facebook izay nanameloka ilay fanafihana. Nosakanan'ny Facebook izao ilay mpanoratra nipetraka ao Kashmir, Qazi Zaid, fa nandefa hafatra niampanga ilay vono olona.
Vatsala Singh namoaka tao amin'ny Facebook hoe:
Nosakanana tsy hizara ny fanoherany ny fidarohana sy ny fanenjehana ny vitsy an'isa any India tao amin'ny facebook i Qazi Zaid, tonian'ny Free Press Kashmir.
Tsy zava-baovao izany. Sakanan'ny facebook izay olona manohitra ny famonoana sy ny zavatra tsy ara-drariny amin'ny endriny rehetra. Mahatonga hieritreritra izany fironana manakana sy mampangina feo mitsikera izany fa natao ho an'andian'olona ireny sehatra media sosialy ireny. Efa manome rariny an'izany fihetsika izany ny andrim-panjakana. Mandray anjara amin'izany ihany koa ny mpanambola satria fikambanana mpitady tombontsoa ireny.
Arakaraka ny hanakanany antsika no vao maika itabatabantsika.
Zava-marina ny famonoana Miozolomana ao India. Miaina ao anaty tebiteby isika amin'izao vanim-potoana izao ary manohana izany ny Fanjakana Indiana. Tsy ho voasakanareo izahay ka anaronanareo ny marina.
Mpikatroka sy vondrona maro no nanao hetsi-panoherana ny famonoana an-kerisetra an'i Afrajul ary an'arivony no nanatrika ny fandevenana azy. Hetsi-panoherana samihafa no nipoaka nanerana an'i New Delhi, renivohitry ny firenena, niaraka tamin'ny tenirohy MuslimLivesMatter, dika mitovin'ny #BlackLivesMatter avy any Etazonia.
Mitombo ny tsy fandeferana
Nisy nahatratra ny faratampony ny fanetsehana olona noho ny raharaha ara-pitsarana, izay manao ho lasibatra ny miozolomana vitsy an'isa ny ankamaroany, hatramin'ny niakaran'ny antoko Bharatiya Janata (BJP) ho eo amin'ny governemanta ao India tamin'ny taona 2014. Rajasthan no mandrakitra ny tompondaka amin'ny fanetsehana olona ho eny amin'ny fitsarana.
Nisioka ilay mpanao gazety Mahim Pratap Singh hoe:
Nampahamenatra ny firenena indray i #Rajasthan.
Miozolomana 4 novonoina tao anatin'ny 9 volana.
Pehlu Khan, 1 Aprily, Alwar.
Zafar khan, 16 Jona, Pratapgarh.
Ummar, 10 Novambra, Govindgarh, Alwar.
Mohammed Afrazul, 6 Desambra, Rajsamand. pic.twitter.com/TbN8PPLSoB
Tamin'ny volana Aprily, novonoin'ny olona maromaro teo amin'ny lalambem-pirenena tao Rajasthan, distrikan'i Alwar ilay mpamokatra ronono antsoina hoe Pehlu Khan, izay nolazaina fa manao fanondranana omby antsokosoko. Tamin'ny volana Novambra lasa teo, hita teo amin'ny lalamby ny vatana mangatsiaka an'ilay mpamokatra ronono Ummar Khan tao aorian'ny nividianana sy nitaterany omby tamin'ny kamio nankao amin'ny tanànany,
Mandritra izany, mpiasa miozolomana mpifindramonina avy ao Rajsamand anjatony no nandositra noho ny tahotra ny ainy, araka ny tatitra avy amin'ny scroll.in ary nangina amin'ny fandadizan'ny trambon'ny fidarohana olona manerana an'i India Ireo mpitarika politika.